MW Xasan oo nabad ku baaqay iyo dagaalka oo mar kale qarxay | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamo ka tirsan Gorgor iyo Haramcad oo qeyb ah, CXD iyo Booliska, oo saaka xilli hore ka degay Dhuusamareeb, ayaa maanta si weyn uga qeyb qaadanaya dagaalka, waxaana la soo sheegayaa inuu jiro qasaaro xooggan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Ciidanka XDS iyo kuwa Galmudug ee maalintii labaad ka socda Guriceel.
Madaxweyne Xasan, wuxuu tacsi u diray dhammaan ehellada iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday dagaalka, halka uu dhaawacyadana u rajeeyay bogsasho degdeg ah.
“Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loo joojiyo dhiillada colaadeed ee taagan. Dagaalku ma xalliyo khilaafaadka siyaasadda ee waxa uu abuuraa kala fogaansho hor leh”. Ayuu yiri, MW Xasan.
Odayaasha dhaqanka, Siyaasiyiinta, Ganacsatada, Haweenka dhallinyarada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, ayuu ugu baaqay in ay qaataan, kaalintooda ku aaddan deminta colaadda. “Lama aqbali karo in dhiigga dhallinyaro Soomaaliyeed uu daadanayo, bulshada inteeda kalena daawato”. Ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku soo aadaya xilli ay burburtay xabbad-joojin labo saac ah, oo dhaqan gashay tobankii barqanimo taas oo ku ekeyd 12-ka duhurnimo, kadib markii hoggaanka ASWJ, codsadeen in jid loo furo si ay uga baxaan magaalada.
Sida wararka ka imaanaya magaalada ay sheegayaan hadda waxaa socda dagaal kharaar oo qarxay 12:30pm, kaas oo xooggiisu uu ka holcayo haka loo yaqaan Jaamacadda oo ay ku aruureen dhamaan ciidanka taabacsan Sheekh Shaakir.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Madaxweynaha Galmudug, Farmaajo iyo inta badan musharixiinta Xilka Madaxweynaha ayaan wali ka hadlin dagaalka degmada Guriceel.